Me Soloniaina Andriamaromanana : « MAMPANAHY NY FITANILAN’NY ZANDARIMARIA! » -
AccueilRaharaham-pirenenaMe Soloniaina Andriamaromanana : « MAMPANAHY NY FITANILAN’NY ZANDARIMARIA! »
11/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Hiaro hosoka sy fampiasana hosoka niteraka famoizan’aina ve ny avy ao anivon’ny zandarimaria? Mipetraka tokoa izany fanontaniana izany taorian’ny valan-dresaka nataon’ny mpisolovava Soloniaina Andriamaromanana sy ny tompon’ny tany misy ilay fitrandrahana, Randrianarimiadana Alphonse tetsy amin’ny Telozoro Andrefanambohijanahary. Nametraka fitoriana mantsy ny vadintany Rakotobearinoely Clovis, voalaza fa niara-dia tamin’ireo zandary nandroaka ireo mpitrandraka tany Ambatomanohina. Nametraka fitoriana ity vadintany ity noho ny fisandohana ny anarany nentina nanatanterahana ireo antontan-taratasy rehetra nampiasaina tamin’ny fandroahana ireo mpitrandraka miara-dia amin-dRandrianarimiadana Alphonse. Sady tsy soniany, tsy adiresiny ary tsy tany an-toerana velively ny tenany, araka ny fitoriana izay nataony izay nohamafisin’ny holafitry ny vadintany. Hosoka daholo koa ny taratasy nentina teo anatrehan’ny Fitsarana ka nahazoana ilay didim-pitsarana nandroaka ny tompon’ny tany.
“Miteny foana ireo avy amin’ny an-kilany hatramin’ireo manam-pahefana (zandarimaria) aza mampanahy mihitsy ny fitanilan’izy ireo ka voatery mitondra izao fanazavana izao amin’ny vahoaka ny tenako izay mpiaro ny tombontsoan-dRandrianarimiadana Alphonse”, hoy Me Soloniaina Andriamaromanana. Miantefa any amin’ny SEG ny jeneraly Paza Didier sy ny CIRGN Antananarivo ny jeneraly Rakotohamanina Florens moa izany tenin’ity mpisolovava ity izany noho ny fanambarana farany nataon’ireto manamboninahitra eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ireto momba ity raharaha ity. Nanamafy ny Mpiaro fa tsy nisy fifampitifirana tany Ambatomanohina fa fitifirana tsotra izao ny G2 Rado. Mbola nanamafy izany moa ireo vavolombelona nanatri-maso ny zava-nitranga ny faha-7 Janoary 2017 izay tonga nanatrika ity valan-dresaka ity.
Efa nambara teto ihany moa ny amin’ny tokony hametrahana komity manokana hisahana ny fanadihadiana ity raharaha mampalahelo ity, mifanojo indrindra tamin’ny fanambarana nataon’ny Me Soloniaina Andriamaromanana mikasika izay mety ho fitanilana eo anivon’ireo manamboninahitra ambony mpitantana ny zandarimariam-pirenena. Ny fanontaniana goavana eo anatrehan’izany rehetra izany dia ny hoe: “hiaro hosoka sy fampiasana hosoka nitarika hatramin’ny fahafatesana zandary iray ve ny zandarimariam-pirenena?”.
Tany eny Andohatapenaka-« Tsy ny CUA no hanakana ny asa efa natomboka », hoy ny M2PATE
Tsy mahay miaina. Raha efa tsy nahazo rariny mikasika ny famadihana ilay tany eny Andohatapenaka ho lasa fiantsonan’ny fiara voasazy (fourrière) ny teo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) dia mitady hirika ny handrodanana ilay fefy ...Tohiny